Market Guide - Yunis International Trading Co, Ltd.
Fifamoivoizana eo an-tsena iraisam-pirenena Trade 1
Lisitry ny indostria: kilalao mahazatra, kilalao tsy tondraka, kilalao plush, kilalao elektrika, firavaka, firavaka volon-bolo, firavaka firavaka, fitaovana fananganana voninkazo, haingon-trano, fitaovam-pankalazana, asa-tanana momba ny fizahan-tany, voninkazo, Crystal karamainty, sary an-tsary.
Ny faritra voalohany dia natambatra amin'ny distrika A, Distrika B, Distrika C, Distrika D ary Distrika E ary manana rihana efatra. Ity faritra ity dia tsenan'ny voninkazo artifika Yiwu ary tsenan'ny voninkazo Yiwu Artificial, tsenan'ny kilalao Yiwu, tsenan'ny firavaka Yiwu ary tsenan'ny firavaka Yiwu, kojakoja Yiwu Hair, tsenan'ny Yiwu Art & Crafts, tsenan'ny sary Yiwu Photo, Yiwu Porcelain & tsenan'ny Crystal, tsenan'i Yiwu Souvenir.
Ity manaraka ity dia ny toerana vokatra voafaritra:
Rota voalohany: Ny voninkazo voakaly dia ao amin'ny Distrikan A sy ny Distrika B; Ny kojakojan'ny voninkazo voakaly dia ao amin'ny Distrika B.; kilalao Plush ary kilalao Plateable dia ao amin'ny Distrika C.; kilalao elektronika dia ao amin'ny Distrika C sy Distrika D; Ny kilalao mahazatra dia ao amin'ny Distrika D sy Distrika E.
Roa faharoa: Ny akanjo volo dia ao amin'ny Distrikan A, Distrika B ary Distrika C; Ny firavaka dia ao amin'ny Distrikan C, Distrika D ary Distrika E.
Roa fahatelo: Ny zava-kanto an-tsary sy ny asa-tanana dia ao amin'ny distrika A; Ny zavakanto sy asa-tanana momba ny haingon-trano dia ao amin'ny Distrika A, Distrika B ary Distrika D; Porcelain & Crystal dia ao amin'ny Distrika D; Ao amin'ny Distric D ny Travel Arts & Crafts; Ny Photo Frame dia ao amin'ny Distrika D sy Distrika E; Ao amin'ny Distrika E.
Roa ambaratonga efatra: ny voninkazo voakaly dia ao amin'ny distrikan A; Ny firavaka dia ao amin'ny Distrika A, Distrika B, Distrika C, Distrika D ary Distrika E; Ny zava-kanto sy asa tanana dia ao amin'ny Distrika B, Distrika C, Distrika D ary Distrika E.
City Trade International (Atsinanana), ny Intenational Trade City
Ireo sokajin'ny indostria: Fitaovana sy kitapo, elo, fitaovana, kojakojan-jaza sy kitapo PLOY, Fitaovana Hardware, Hardware & Fitaovana sy trano fandroana, lakile, famantaran-trano sy famantaranandro, Fitaovana an-trano, Fitaovana herinaratra, fitaovana momba ny fifandraisan-davitra, fitaovana sy fitaovana.
Ny faritra faharoa dia natambatra avy amin'ny Distrikan'ny F sy ny District G ary misy rihana 5. Vondrom-paritra roa no Yiwu Rain Gear tsena, Yiwu valizy & Bag tsena, Yiwu Hardware & Tools tsena, Yiwu Lock tsena, Yiwu Household Electronics tsena, Yiwu Metal Kitchenware tsena, Yiwu Watches & Clock tsena, Yiwu Electronics tsena, Yiwu Fifandraisan-davitra tsena, Yiwu Electronic Instruments tsena.
Roa voalohany: Poncho, Coat Rain ary Umbrella dia ao amin'ny Distric F; Ampana sy kitapo no ao amin'ny Distrika F.
Roa faharoa: Any Lock dia ao amin'ny F F; Ao amin'ny Distrika F ny fitaovana; Ny Hardware dia ao amin'ny Distrika F sy Distrika G.
Roa fahatelo: Ny Haram-bolam-bolo dia ao amin'ny Distrika F; Elektronika tokantrano dia ao amin'ny Distrika F; Ny fifandraisan-davitra dia ao amin'ny Distrikan G; Ny famantaranandro sy famantaranandro dia ao amin'ny Distrikan G; Ao amin'ny Distrika G.
Roa ambaratonga efatra: ny galera vokatra an'ny faritra dia ao amin'ny Distrikan F F; Ao amin'ny Distrika F; Ao amin'ny Distrika F; Ao amin'ny Distrika F; Ao amin'ny Distrika F ny galeriana vokatra ao Korea; Ny Hardware dia ao amin'ny Distrika F mankany amin'ny Distrika G; Ny kitapo sy kitapo dia ao amin'ny Distrikan G; Ny Elektronika dia ao amin'ny Distrikan G; Any amin'ny Distrika g ny famantaranandro sy ny famantaranandro
Làlana fahadimy: trano famatsiam-bola avy any ivelany.
Distrikan'ny varotra iraisam-pirenena faha-3
Yiwu International Trade City, Distrika 3 no faritra fananganana 460000 metatra toradroa. Iray amin'ny rihana telo ka hatramin'ny 6000 metatra toradroa. Efatra efatra sy dimy no manana mihoatra ny 600 mijoro miaraka amin'ny 80-100 metatra toradroa. Ny rihana fahefatra dia natao ho an'ny famokarana ivotoeram-barotra mivantana.
Lohahevitra momba ny indostria: bokotra, Zippers, fitaratra, kosmetika, pensilihazo & paty sy lahatsoratra an-taratasy, Sampana fanamboarana birao, fanatanjahantena, lahatsoratra fanatanjahantena, fitaovana fanatanjahantena, fitaovana.
Yiwu Futian Market Area telo dia ny tsenam-bokatra Yiwu, tsena fitotoana Yiwu, tsenan'ny fanatanjahantena Yiwu, tsenan'ny sampana Yiwu, tsenan'akoho Yiwu ary tsenan'akoho kosmetika, tsena tsara tarehy sy fikarakarana an'i Yiwu, bokotra Yiwu & tsinjara zipper, tsenan'akanjo fitafiana Yiwu, tsenan'akoho Yiwu ary fivarotana kosmetika tsenan'ny sary hosodoko haingon-trano.
Ireto manaraka izao ny toerana misy ireo vokatra:
Tratra voalohany: Karazana penina, ranomainty, vokatra vita amin'ny taratasy ary solomaso.
Gorodona faharoa: karazana fitaovam-pitaterana, kojakoja birao, fanatanjahan-tena sy ny fialam-boly.
Trano fahatelo: karazana kiraro sy kojakoja vita amin'ny kosmetika, hatsaran-tarehy sy fikarakarana manokana, fitaratra ary kitapo, bokotra & akora ary kojakoja vita amin'ny akanjo.
Lafatra fahefatra: trano fanatsarana tarehy sy hatsaran-tarehy sy fikarakarana manokana, trano fanatanjahantena entana sy kojakoja ivelany, trano fanamboarana akanjo.
Lafatra fahadimy: sary hoso-doko vita amin'ny haingon-trano sy hosodoko.
Distrikan'ny varotra iraisam-pirenena faha-4
Ny Yiwu International Trade City District 4 nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 21 Oktobra 2008. Ny faritra fananganana tsena dia 1.08 tapitrisa metatra toradroa, ary orinasa 16000 mahery no manofa trano 19000 mahery.
Ireo sokajin'ny indostria: Takelaka isan'andro, kitapo ary lamba vita amin'ny landy (ao anatin'izany ny bra, ny ambanin'akanjony, ny marika, ny fonon-tanana, ny akanjo vita ary ny lamba vita amin'ny knitting hafa), ny tariby kiraro (anisan'izany ny fehikibo), ny Knitwear (hosiery), ny volom-borona, ny lamba, ny lamba, ny lamba.
Yiwu Futian Market Area efatra dia ahitana ny kiraro kiraro Yiwu sy tsenan'omby, Yiwu tsenan'ny trano, Yiwu hat market, Yiwu sarin'akondro, Yiwu knitting market, Yiwu tsenan'omby, Yiwu tsenan'akanjo kiraro, Yiwu tsenan-tsoavaly, tsena Yiwu ambany, tsena Yiwu scarf, Yiwu rindran'asa sy tsenan'ny fidirana amin'ny rindran-tsary sy foibe fitsangatsanganana Yiwu.
Gorodona voalohany: karazana kiraro sy leggings rehetra.
Làlana faharoa: isan-karazany amin'ny entam-pianakaviana, voanaly sy vita amin'ny landihazo, satroka, fonon-tanana, kavina.
Trano fahatelo: isan-karazany knitting volon'ondry, fatorana, lamba famaohana, kiraro. Fahaefatra efatra: karazana fehikibo sy fehikibo momba ny fehikibo, ambanin'ny ady, scarf ary leggings.
Làlana fahadimy: foibe fitsangatsanganana Yiwu, lamba, kiraro, tokantrano (seramika avy any Chaozhou), fika sy sary hoso-doko.
Ny distrika 5 dia mahasahana faritany 266,2 ha, faritra fananganana 640,000 metatra toradroa, fametrahana fampiasam-bola 1,2 miliara yuan (akaikin'ny 221,5 tapitrisa dolara), dimy sosona, roa ambanin'ny tany, ary toerana misy orinasa 7000 mahery.
Ny Distrika 5 vaovao namboarina dia natao indrindra ho an'ny vokatra ampidirina, lambam-pandriana sy ambainy, lamba, fiara ary kojakoja môtô.
Yiwu Futian Market Area dimy dia misy ny tsenan'entana fanafarana entana, tsenan'ny vokatra ara-pahasalamana, tsenan'ny lamba ampidirina, tsenan'ny haingon-tsofina manan-danja, tsenan'ny fampirantiana Afrika, tsenan'ny fandriana, tsenan'ny famatsiam-panambadiana, tsenam-borona, tsenan-tsoroka, tsipika vita amin'ny mofomamy, fiara an-tsena. , tsenan'ny biby fiompy.
Làlana voalohany: karazan'antoka amin'ny fanafarana, kojakoja fikarakarana ara-pahasalamana, lamba ampidirina, zava-kanto sy fanafarana, foibe fampirantiana Afrika ary zavatra hafa nafarana.
Gorodona faharoa: isan-karazany fandriana, kojakoja fampakaram-bady sy wigs. Trano fahatelo: isan-karazany ny ambainy, raikitra ny mofomamy ary kojakoja fampakaram-bady.
Tranon-fahefatra: Karazan'entana rehetra, singa môtô sy kojakoja biby.